Madaxwaynaha Yemen oo naftiisa halis ku jirto haddii uu Cadan ku laabto | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha Yemen oo naftiisa halis ku jirto haddii uu Cadan ku laabto
Madaxwaynaha Yemen oo naftiisa halis ku jirto haddii uu Cadan ku laabto
Cabsida laga qabo in shirqool lagu dilo madaxwaynaha dalka Yemen Cabdrabu Mansuur Haadi kaasi oo dalka kaga maqan dadka boqortooyada Sacuudi Carabiya.
“Madaxwaynaha shirqool dil ah ayaa dhici karta inuu la kulmo haddii uu Sacuudi Carabiya ka tago oo uu ku laabto magaalada Cadan” sidaa waxaa laga soo xigtay Sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda tabarta daran ee dalka Yemen.
Cabdrabu Mansuur Haadi, madaxwaynaha dalka Yemen ayaa ah madaxwayne Caalamka uu aqoonsan yahay, hase ahaatee Xukuumaddiisa xubnaha ugu sarsareeya kama howl galaan dalka Yemen oo waxaa ay ka howgalaan magaalada Riyadh ee caasimadda dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Xukuumadda Yemen ayaa laga soo saaray xarunta dalkaasi ee Sanca ka dib markii ay dalkaasi intiisa badan ay qabsadeen kooxda hubaysan ee Iran ay taageerto ee Xuuthiyiinta kuwaasi oo isbahaysi la ah madaxwaynihii hore ee dalkaasi Cali Cabdalla Saalax.
Warar lagu qoray qaar ka mid ah warbaahinta Carabta ayaa sheegay in madaxwaynaha Yemen lagu xiray Sacuudi Carabiya.
Warkaasi waxaa beeniyay saraakiisha sar sare ee Yemen oo sheegay in madaxwaynaha 72 sano jirka ah Ammaankiisa loo baqay Xukuumadda Sacuudiguna uu Mr Haadi ka cilisay inuu aado magaalada Cadan.
“Madaxwaynaha waa xur, meeshuu doono wuu aadi karaa, hase ahaatee waxaan fahansanahay ayaa ah in nolashiisa ay halis ku jirto hadii uu Cadan ku laabto” sidaasi waxaa Television-ka AlJazeera u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Yemen kaasi oo Tv-gu magaciisa aan sheegin.
Xukuumadda Yemen ayaa magaalada Riyadh xarun u ah tan iyo sanadkii 2015 xilligaasi oo Xuuthiyiinta dalkaasi ay dowladda kasoo eryeen caasimadda dalkaasi ee Sanca.
Previous articleMaroodiyaal 2 dalxiise ku dilay dalka Zambia